TPLF tarsiimoo fi imaammata sobaan ummata burjaajessaa jira.
Falmataa Oromoo 04/01/2013
Akkuma yeroo addaatti miidiyaalee fi websiten darbutti TPLF karoora guddinaafi tranisfomation jedhamu qabatee deema. Garu karoorri kun yoomii akka jalqabee fi yoom akka galma ga'u ummata biratti beekamtummaa hin qabu. Imaammata sobaa kana galmaan ga'uuf TPLF karoora gurguddaa lama qaba. Isaanis:-
1. sektera barnootaa babalisuu 2 . hojii uumuu ykn small micro interpiris kan jedhuu dha.
Karoori lamaan armaan olii kun ummata oromoo hiyyummaa bara baraa fi doofumma keessatti kuffisaa akka jiru nama kam jala kan dhoktu miti. manneetii barnootaa babal'isuun ummata oromoo irraan balaa hagana jedhamee tilmaamamuu hin dandeenyeef saxila baasaa jiran keessaa beekamoon 1 barnoota tekinikaaf ogummaa aanaalee oromiyaa keessatti level 1-4 barsiisaa jira. Garuu barattoonni yeroo fi maallaqa isaanii barbadeessaa jiru malee bu'aa tokkoo illee buufachaa hin jiran. Sababi isaas 1. hir'inni barsiisaa yoo xiqqaate 65% dha. Akkasumas warren 35% barnoota sirriitti kennuu hin danda'an . Sababni isaas ulaagaan barsiisoti kun ittin ramadaman keessa inni guddaan miseensa tplf ta'uu dha malee cimin dandeetti barnootaa ykn grade GPAn dorgomanii kan ramadaman miti
Referaansii fi pactisiin 99.5% hin jiru. Barataan oromiyaa , notii barsiisaan kennameef praactisii ykn shaakala tokko malee shamaddadee akka bartaa seenaa qormaata qorama. Garuu namoonni tv hordofan dhugaa bahuu danda'u maqalee fi bahir daar poli tekinik koolleejjiin barsisota m.s qabaniif referaansii barataan dubbisu chikagoo university wajjin wal qixa yoo jenne kan nu sobsiisu miti. Kolleejjiiwwan kana keessatti barnoonni 75 % practicali 25% theory, qormaanni 3o% theory ,70 practicali. Garuu oromiyaa keessatti barnootni fi qormaanni 100% theoryiidha.
2. Barnootuma kanaan kan wal qabate "coc" qormaata ga'umsaa jechuun TPLF'n kubbaaniyaa daldalaa waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate galii biliyoona 2 olitti tilmaamamu ummata oromoo irra argata. Barataan tokko barnoota isaa erga xumuree qormaata "coc" kana darbuun dirqama hojii argachuuf. Qormaata kana qoramuu tokkoo tokkoon Barataa qarshii 300 mootummaaf galii godha. baasii geejjibaa,nyaataa, fi kkf baasee baltao godinatti qorama. Haa ta'u iyyuu malee qormaanni "coc" jedhamu kun 70% practisii 30% theory dha garuu barataan kan barate 100% theory waan ta'eef yoo baay'ee ta'an barattoonni milka'an 3% qofa. Isaan iyyuu ijoollee fi firoottan kaabinoota tplf ti. Kanaaf qormaanni "coc" ykn center of computer jedhamu kun oromoota cinatti hiiki isaa"c"jechuun, carraa "o" oromoo "c" cufuu ykn carraa oromoo cufuu jechuun hiiki itti kennama ykn afaan ingiliffaan "c" comercial "o" organized"c" company ykn comercial organized company jedhama. Gabaabumatti barattoonni oromiyaa tplf'n fajachaa jira malee barsiisaa hin jiru. Qormaata fakkeessee saamuun dargaggon oromo mana nama galani akka garbaatti hojjechaa jiru, kan arii guddaa irraan kan ka'e biyya hambaatti karaa seeraan ala sudaan, keeniya, jibuutiitti guyyaa guyyaan dargaggoonni kumaatamaan lakkaawwaman galaanaan, bubbeen,beelaan ; dhiyaana qurxummiifi allaattii ta'ani dhumaniiru, kanaaf dargaggoon oromoo yoo hin qabsoofne oromiyaan waggaa 10 booda sabni oromoo irraa dhumee dachee qofti akka haftu namni kam iyyuu tilmaamuu danda'a.
Karaa unversity babal'isuun:akkuma beekamu ethiopiaa keessa unversity'n gara 33 ol guddatee jira haata'u iyyuu malee tplf'n tajaajila barataa unversity fi godhamu 20%guutee hin jiru unversitota haarawaa kana keessatti guutamee hin jiru. Haata'u male tplf'n barattota oromoo miidhuuf unversiitota haarawaatti ramada. Daataa rimiddii barattotaa kan bara 2002 akka fakkeenyaatti mana barumsaa qophaa'ina manasibuutti barattootni qormaata enteransi fudhatan 78 turan barataan social barattoota kana keessa 1 jimmaa 2 haromayaa 3 finfinnee 1 adaamaa 2 mizan teepi umversty kannen hafan barattoota gara 56 samaraa unversitytiitti ramadaman akkasumas najjoo irraa barataa 47 samaratti ramadaman. Kanneen keessa barattoonni 50 badani galan. Tajaajilaa fi haala qilleensa naannoo irraan kan ka'e ,yoo baay'ee ta'an barataa najjoo fi manasibu 103 ta'an keessaa barataa 30 ol kan hin taanee dha kan eebbifamanii galan.
Kanaaf mootummaan TPLF bosona keessatti saaxoo walitti qabee barattoota oromoo itti guuraa jira. Barattonni kun tajaajila barataaf barbaachisu osoo hin taanee lubbuu keenyaan jiraachuuf hin dandeenye jedhanii yemmuu gaafatan, isin abo dha jechuun rasaasi itti dhukaafama. Baruma kana keessa barattoönni. 1 samaraa unversity 2 mattuu unversity 3 maqalee 4 jimmaa 5 mizan tepi unversity jeequmsa kaasaa turan . Garuu deebiin hoggantoota tplf biraa deebi'eef meeshaa itti dhukaasuun . Walumaa galatti tplf'n barattoota oromoo akka hin baranne gochaa jira. Kannen baratan immoo akka isaan hin milkoof neef miidhaa addaa addaa irran ga'aa akka tureefi akka jiru sabni oromoo marti ni beeka. Kaayyoon tplfs mana barumsaa babal'isuu fakkeesse ummati oromoo 1 doofummaatti hambisuu 2 kanne baratan beekumsa ga'aa akka isaan hin arganne godhee sirna bittaa isaa dheereffachaa jira. Kanaaf nuti dargaggoonni oromoo callisnee taa'uun nurra hin jiru.
Coc 'n qormaata ga'umsa jedhe tplf ijoolle oromoo ykn oromiyaa barnoota tvet ykn tekinikaaf ogumma baratan ittiin kuffisaa jiruudha . Coc'n akka tplf jedhutti center of computer jedhama. Ani immoo hiika adda ta'e kenneefin ture barreffama kaleessa web irratti gadi dhiiftan yoo ni yaadattu ta'ef "carraa oromoo cufuu" jechudha jedhe gabaajee "coc" jedhutti kennen ture ykn afaan ingiliffaan coc jechuun commercial organized compan jedhe kan ani hiika itti kenneedha. Isin illee waa'ee coc kana sirritti beekuu qabdu jedheen yaada ummati oromoo saamamaa jira tplf qormata kana sababa godhatee barataan kolleejji 10+3 hundi ni qorama .qoramuuf barataan tokko qarshii 300 baasa mootummaaf . Kun currenti issue dha yeroo amma kana irratti xiyyeeffadha na caalaa isintu madda information qaba. Qabxi kana irratti radio fi web yoo dabarsitan onnee dargaggoota danuu booji'uu dandeessu ani ille kanaafan yeroo koo gubee research irratti hojjechaa ture. Osoo fagoo hin deemin ganda baabboo buundii keessa qofa barataa 38 tu qormaata kan kufee dhama'aa jira, kanaaf akka oromiyaa guututti research'n kun osoo hojjetame sababa coc kanaan barataan kufee gaaddisa mukaa taa'aa olu biliyon 2.5 ni ta'u jedheen yaada. dhama'aa jira, kanaaf akka oromiyaa guututti research'n kun osoo hojjetame sababa coc kanaan barataan kufee gaaddisa mukaa taa'aa olu biliyon 2.5 ni ta'u jedheen yaada.
Oromiyaa University irraa